A departures screen displays a cancelled flight to Johannesburg and a message to contact the airline for a scheduled flight to Capetown, at London's Heathrow Airport, Friday, Nov. 26, 2021. The U.K. announced that it was banning flights from South Africa and five other southern African countries effective at noon on Friday, and that anyone who had recently arrived from those countries would be asked to take a coronavirus test. Credit: AP Photo/Alberto Pezzali
People wait to get vaccinated at a shopping mall, in Johannesburg, South Africa, Friday Nov. 26, 2021. Advisers to the World Health Organization are holding a special session Friday to flesh out information about a worrying new variant of the coronavirus that has emerged in South Africa, though its impact on COVID-19 vaccines may not be known for weeks. Credit: AP Photo/Denis Farrell
People queue to get vaccinated at a shopping mall, in Johannesburg, South Africa, Friday Nov. 26, 2021. Advisers to the World Health Organization are holding a special session Friday to flesh out information about a worrying new variant of the coronavirus that has emerged in South Africa, though its impact on COVID-19 vaccines may not be known for weeks. Credit: AP Photo/Denis Farrell
People shop in a mall, in Johannesburg, South Africa, Friday Nov. 26, 2021. Advisers to the World Health Organization are holding a special session Friday to flesh out information about a worrying new variant of the coronavirus that has emerged in South Africa, though its impact on COVID-19 vaccines may not be known for weeks. Credit: AP Photo/Denis Farrell
A passenger walks through International Arrivals, at London's Heathrow Airport, Friday, Nov. 26, 2021. The U.K. announced that it was banning flights from South Africa and five other southern African countries effective at noon on Friday, and that anyone who had recently arrived from those countries would be asked to take a coronavirus test. Credit: AP Photo/Alberto Pezzali
People wearing masks on an escalator at a shopping mall, in Johannesburg, South Africa, Friday Nov. 26, 2021. Advisers to the World Health Organization are holding a special session Friday to flesh out information about a worrying new variant of the coronavirus that has emerged in South Africa, though its impact on COVID-19 vaccines may not be known for weeks. Credit: AP Photo/Denis Farrell
A mother takes time to rest with her children in Harare, Zimbabwe, Friday, Nov, 26, 2021. A slew of nations have moved to stop air travel from southern Africa, and stocks have plunged in Asia and Europe in reaction to news of a new, potentially more transmissible COVID-19 variant. Credit: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi